फैशन प्रिन्ट - शरद ऋतु-सर्द 2016-2017
चमकदार रंगहरू, आकर्षक चित्रहरू, सुन्दर अप्ठ्यारोहरू र असामान्य संयोजनका प्रेमीहरू, नयाँ शरद ऋतु-जाडो मौसम विशेष गरी फैशन संग्रहहरूको रंग समाधानमा डिजाइनरहरू द्वारा प्रस्तुत स्टाइलिश उपन्यासहरूसँग प्रसन्न हुनेछन्। अनि निस्सन्देह, सबैभन्दा लोकप्रिय र सान्दर्भिक सम्बन्धमा अलमारीको छनौट हुनेछ। वास्तवमा, यो चित्रण, छवियों र गहने हो कि व्यक्तित्व, दृढता र यसको मालिक को असामान्यता को रेखांकित। फैशन प्रिन्ट शरद ऋतु - 2016-2017 सर्द - यो उज्ज्वल रङ, र शान्त र आकर्षक तराजू को एक कुशल संयोजन को रंग हो, साथसाथै सज्जन र अपरिवर्तनीय ग्रैडेंट्स।
2016-2017 को शरद ऋतु-जाडो मौसमको सबैभन्दा लोकप्रिय छाप
नयाँ संग्रहमा छापिएका स्टाइलिश वार्ड्रोबका फेसन ट्रेन्डहरू - यो मुख्य रूपमा एक पकड र अभिव्यक्ति हो। तपाईंको छनौट अरूको ध्यान आकर्षित गर्न बाध्य छ। यस अवस्थामा, तपाईं उज्ज्वल नहुन सक्नुहुन्न, तर अरूको पृष्ठभूमिमा तपाईंको विपरीत स्पष्ट हुनुपर्छ। आउनुहोस् कि कुन प्रकारको प्रिन्टर सबैभन्दा शरद ऋतुमा शरद ऋतु-2016 2016-2017 हो?
पोर्ट्रेट प्रिन्टर शरद ऋतु - 2016-2017 सर्द। सबैभन्दा लोकप्रिय छनौटहरू अनुहारहरू र लुगाहरूमा अनुहारको छवि हो। नयाँ सिजनमा, एक फैशनेबल समाधान कलाको प्रसिद्ध कामहरू र साथै विश्वको शो व्यापारका ताराहरू हुनेछन् जसको फोटोले स्टाइलिश अलमारीको सजावट गर्नेछ।
ज्यामितीय प्रिन्ट शरद ऋतु - जाडो 2016-2017। अझै पनि सबै प्रकारको ब्यान्डको प्रवृत्तिमा। यो प्रिन्टमा कुनै दिशा - तेर्सो, ऊर्ध्वाधर, विकर्ण, साथसाथै zigzag र broken हुन सक्छ। कुनै कम सम्माननीय छैन सेल । तर नयाँ शरद ऋतु-सर्दको अवधिमा यो प्रिन्टमा धेरै असामान्य र सारपूर्वी आकृति छ। ठूलो लोकप्रियताले ठूलो मटर प्राप्त गर्यो। र अधिक सर्कल, राम्रो।
फूल-फल प्रिन्ट शरद ऋतु-2016-2017। पुष्प विषयवस्तुमा लोकप्रिय चित्रहरू वसंत रचनाहरूको चित्र हुन्। स्टाइलिस्टहरू स्नोड्रोप, टुलिप्स र फिननेसिन अन्य किसिमका अन्य प्रकारका ताजगी र आलोचना द्वारा आकर्षित भएको थियो। तर फलहरू शरद ऋतुमा निहित विषयवस्तुमा प्रस्तुत गरिएका छन्। सबै भन्दा फैशनेबल कपडा मा सेब र नाशपाती प्रिंट छ।
मैनीक्योर ट्रेंड्स 2014
कपडेको सेट घटाउनुहोस् 2013
2016 को लागि स्टाइलिश कपडे
लुगा लगाएर 2013
Sogo 2013 कपडे
स्ट्रीट फैशन 2016
बुटेटेड कार्डिग 2015
महिलाको बूट - स्प्रिंग 2015
गर्मी 2014 को लागि अलमारी
फैशनेबल मेकअप - वसन्त 2016
2014 मा कस्ता कपडाहरू छन्?
सोफे मा प्रेंसेंस शैली
बिल्लियों को ठूलो प्रजाति
डचशोन्ड - नस्ल वर्णन
नयाँ वर्षको सलाद र नाश्ता
टिबेरुलिन परीक्षणको ट्यूब
बच्चाहरु को लागि वस्त्र आकार - तालिका
एल्कको मासु - उपयोगी गुणहरू
रंगीन जीन्स 2013
मार्गो रोबी र लियोनार्डो डेक्यापियोरी
व्यक्तित्वको व्यावसायिक अभिविन्यास
कलेजमा साइन इन
महिलाहरु रेशम पजामा
Stoletnik - लोक चिकित्सा को व्यंजनहरु
छाती को चोट - घर मा उपचार
कसरी उजुरीबाट वास्तविक Ugg Uggs भेद गर्ने?
एलेक्स रुव र च्लो ग्रेस मोरेटेज
विशेष चालक दल - सबैभन्दा पुरानो बच्चा वाहक